Te hampandini-tena ny mpitondra ankehitriny ireo olom-pirenena tsy manangan-tsaina, hoy ny sekretera jeneralin’ny antoko VAMI (VAhoaka MIray), Gaby Vakiniadiana, raha naneho ny heviny mikasika ny antony mahavitsy ireo sainam-pirenena mitsangana isan-tokantrano amin’izao fotoana.
Namidin’ny mpitondra ny tolona sy ra latsaka tamin’ny 1947, hoy izy, ary tsapan’ny olom-pirenena izany. Miharihary io amin’ny fivarotana ny tanintsika amin’ny vazaha sy sinoa sy karana. Fampandinihan-tena ny mpitondra sady fitakiana ny fametraham-pialany ny antony tsy fananganan-tsaina, hoy izy. Ireo vazaha indray no mandrafitra ny firenena Malagasy kanefa mpiara-miombon’antoka fa tsy mpiara-mitantana akory ny PNUD.